ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ၈ ဦး တရားရုံးတင် စစ်ဆေးမည် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| February 5, 2013 | Hits:20,624
| | ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အရာရှိများ ၀န်ကြီးဌာနတွင်း လုပ်ငန်းများကို လိုက်လံစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး အရာရှိ ၈ ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကာ မကြာမီ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူ ခံထားရသည့် ဆက်သွယ်ရေး အကြီးတန်းအရာရှိ ၈ ဦးကို လာမည့်နှစ်လအတွင်း တရားရုံးတင် စစ်ဆေးမှုများ စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ပုဒ်မ ၄၀၉ ဖြင့် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခံနေရပြီး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကာလအလွန် လာမည့်နှစ်လခန့် အကြာတွင် အများနှင့်သက် ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်သည့် ဥပဒေ (အပက-၃) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ပြုလုပ်တော့မည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန် ကြီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိများ အရေးယူရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် အမှုများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက် တွင်ဖြစ်ပေါ်သော အမှုများကိုသာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
လတ်တလော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဦးသိန်းဦး အပါအ၀င် အရာရှိ ၈ ဦးကို နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း အလွဲသုံးစားလုပ်မှု ပုဒ်မ ၄၉၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး အရေးယူရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ အရေးယူရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲ ယခု အစိုးရသစ် လက်ထက်အတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသန်း ၃၀ ချထားပေးမည့် စီမံကိန်းနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အရာရှိတဦးပြောသည်။
“အရင်ခေတ်က အမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအစိုးရသစ်မှာ လတ်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေ၊ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်း ချပေးတဲ့ကိစ္စ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေ တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊ ပုဂ္ဂလိက ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ အရင်ခေတ်က အမှုတွေပါ ပြန်စစ်ရင်တော့ အားလုံး မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပါမယ်” ဟု အဆိုပါအရာရှိက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှာ ဦးသိန်းဇော်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဦးသိန်းဇော်သည် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများမှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ၏ သားသမီးများ ပိုင်ဆိုင် ထားကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် စစ်အစိုးရလက်ထက် ခြစားမှုများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူရန်မှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရလည်း နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခွင့်မရှိဟု တရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် အရေးယူရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း ၁၄၊ ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် အစိုးရသစ်သည် ယခင်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်မှု၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ပြန်တမ်း၊ ကြေညာချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်၊ တာဝန်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံရဖြစ်ပြီး ယခင်အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အကြောင်းပြုပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး (မှုခင်း) ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးဝင်းစိန်ကလည်း ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ၈ ဦး အမှုဖွင့်ခံထားရမှုမှာ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော အလွဲသုံးစားမှုများနှင့်သာ ဆက်စပ်ပြီး CID က ဦးဆောင် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အရေးယူခံထားရသည့် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိများတွင် အချို့မှာ ရာထူးချထားခံရခြင်း၊ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ ခြင်းများရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အခြားအရာရှိများကိုလည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများကို ခေါ်ယူမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့်အပြင် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ၀ယ်ယူသည့် ကိစ္စ၊ တရုတ် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် ZTE,၊ HUAWEI များနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကိုလည်း စစ်ဆေးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံသားတိုင်း သက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ၅ နှစ်အတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သန်း ၃၀ ချထားပေးမည့် စီမံကိန်းတရပ် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ယင်းစီမံကိန်းအတွက် ဦးကျော်ဝင်းပိုင် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ၊ ဦးတေဇပိုင် E-Lite Tech, ရတနာပုံ တယ်လီပို့၊ စက်မှု ၁ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း၏ သားဖြစ်သူ ဦးနေအောင် အပါအ၀င် ဆွေမျိုးများ ပိုင်ဆိုင်သည့် IGE ကုမ္ပဏီ၊ Asia Mega Link ကုမ္ပဏီ အပါအ၀င် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် နီးစပ်သည့် ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၂၃ ခုနှင့် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ ၁၃ ခုက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ကျန် ၁၀ ခု မှာစက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ ရရှိခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းကို ရာထူးမှ အနားယူခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ရှေ့သို့လှမ်းချီမည့် MPT က အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့်MPT ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းကတ် ၅ သန်းကျော် ရောင်းချမည်မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းတွေရဲ့ ရာဇ၀င်တယ်လီနော ဖုန်းကတ် ၁၀ သန်း စက်တင်ဘာတွင် စတင်ရောင်းချမည်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစကောင်းသော်လည်း ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများက စောင့်ကြိုနေ
pps၁၂၃၄၅ February 5, 2013 - 8:09 pm အရင် အစိုးရ လက်ထက် တုံး က အစိုးရ ဆီက ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ယူကြတယ်။
ရှမ်းပြည်မှာ ဆို ပတ္တမြားတွေ ကုန်ပြီ။ ဘာတင်ဒါမှ မခေါ်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူကို ပဲ ပေါပေါပဲပဲနှင့်ပေးလိုက်တယ်။
ကချင်ပြည်မှာဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ကျောက်တူးချင်ရင် အစိုးရက ချပေးတဲ့လူဆီမှာ ပြန်ဝယ်ရတယ်။
ဘာလဲတဲ့ ဥပဒေ နောက်ကြောင်းပြန်လည် အရေးယူခွင့်မရှိ။
လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ပြီး သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေ ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေ…
Reply lwinhtaytunwai February 6, 2013 - 10:22 am သန်းရွှေတို့ကတောအပိုင်ကိုလုပ်ခဲ့တာပဲ။သူ့အလှည်ကျတော့ကြောက်တက်လိုက်တာ။မင်းရဲ့သားမြေးတွေလက်ထက်ကြရင်သေချာပေါက်ဒီအမှုတွေပြန်ဖော်ပြီးအရေးယူခံရမှာပါ။မင်းမြင်ခွင့်၊ကြားခွင့်၊တွေ့ခွင့်ရနိုင်ပါစေ။မင်းရဲ့ချစ်တပည့်တွေဘာတွေထပ်ဖြစ်အုံးမလဲဆိုတာကို။ငါတို့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကျိုး၊အဓမ်မပစ်စည်းသိမ်းယူခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးအပြစ်ပေးဖို့မကြာတောတဲအချိန်မှာဖြစ်လာမှာပါ။မင်းရဲ့ဥပဒေကဘယ်လောက်ထိခိုင်မာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့။
Reply U Toe Toe February 6, 2013 - 1:16 pm ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ အရ အရေးယူခြင်း မပြုရ ဆိုတာက တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်မှာ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး အရ ဆောင်
ရွက်ချက်များ အပေါ် မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားတာ၊ အဂတိလိုက်စားတာတွေကိုတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တည်ဆဲ အထူးဥပဒေတွေအရ ပြန်
ဖော်ထုတ် စစ်ဆေး အရေးယူသွားရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်လျင်အရင်အစိုးရလက်
ထက်က သူခိုးမှု၊ ဓါးမြမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ ယုံကြည်အပ်နှံမှုဖောက်ဖျက်မှု တွေကိုလည်း ဒီအစိုးရလက်ထက် စစ်ဆေးအရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
Reply thagyikyaw February 7, 2013 - 6:28 pm right
Reply htike February 8, 2013 - 4:20 pm absolutely right
Replyုko pyar February 7, 2013 - 7:38 pm်မောင်တေဇ ။မောင်နေအောင် မက်(စ်)ဇော်ဇော် တိုင်းပြည်လုပ်ငန်း ၈၀ ရာနှုန်းခွဲဝေထားကြတယ် အခြေခံလူတန်းစားကတော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်၃၀ အချိန်ကတည်းကရင်း မွဲပြီးရင်း မွဲရင်း အခုချိန်ထိပါဘဲ
Reply Maung Ko Ko February 8, 2013 - 7:49 pm ၊ HUAWEI နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကိုလည်း စစ်ဆေးသွားရန်ရှိကြောင်းဆိုပါလား။
့HUAWEI ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၀င့်ကြွားစွာပြောပါတယ်၊ သူတို့ ရဲ့ HWAWEI ကI main ရုံးချုပ်ကို
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က လာလည်တာနှစ်ခေါက်ရှိပြီတဲ့။ ZTE ၇ုံးချုပ်တောင် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က မသွားလည်ဘူးတဲ့။ ခုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲ။
Reply maung Ko ko February 8, 2013 - 10:57 pm HUAWEI များနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကိုလည်း စစ်ဆေးသွားရန်ရှိကြောင်းဆိုပါလား
့HUAWEI ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၀င့်ကြွားစွာပြောပါတယ်၊ သူတို့ ရဲ့ HWAWEI ကI main ရုံးချုပ်ကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်း လာလည်တာနှစ်ခေါက်ရှိပြီတဲ့. သူတို့ ကအေးဆေးပဲတဲ့
သမ္မတကြီးက ZTE တောင် သွားလည်တာမတွေ့ ရဘူးတဲ့.
Reply Wut Yee February 12, 2013 - 5:29 am သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သူ့ အိမ်မက်စိတ်ကူးထဲမှာ
ဖုန်းတွေက်ု ငါးထောင်ကျပ် နှင့်ပြည်သူတွေကို ရောင်းပေးနေသည်။
လက်တွေ့ က ယခုဖုန်းတစ်လုံးလျင် နှစ်သိန်းခွဲကျပ်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ဖုန်းဈေးကို ၅ထောင်အသာထား၊ ၅သောင်းတောင်လျော့မရနိုင်တာကို ယခုတိုင် ၀န်မခံသေး။
ဦးပိုင် က ဂိုတာဖုန်းများကို အော်ပရေတာမယူပဲ ၈သောင်းနှင့် နားလှည့်ပါးလှည့် လုပ်ကာရောင်းချင်နေပြီ။
Reply Albert February 17, 2013 - 8:25 am If all are in real issue, it good for us.